What data will WhatsApp collect on you and share with Facebook? ﻿
WhatsApp မှ ဘယ်လိုအချက်အလက်များကို သင့်ထံမှရယူပြီး Facebook နဲ့ sharing ပြုလုပ်နေသလဲ?
ယခင်ကသတင်းတစ်ပုဒ်မှာ ကျွန်ုပ်တို့မှ WhatsApp ဟာ Facebook ထံသို့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို မျှဝေပေးနေကြောင်းကြေငြာချက်တစ်ရပ်ကို ရေးသားတင်ဆက်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ထိုအရာဟာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက်နေ့၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် စတင်သက်ရောက်မှုရှိလာတော့မှာဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှု (business communication) များအတွက် သက်ရောက်မှုရှိစေတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြောင်းလဲမှုဟာ သင့်အနေနဲ့ WhatsApp နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုထံသို့ ဆက်သွယ်မှုများပြုလုပ်တဲ့အခါတွင်မှသာ သင့်ထံမှအချက်အလက်များကို ကောက်ယူနိုင်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ယခုအခါ platform ပေါ်ရှိ လုပ်ငန်းပေါင်း သန်း ၅၀ ခန့်နှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုများပြုလုပ်သည့်အခါတွင်Facebook သို့ မျှဝေသွားမည့် ဒေတာများအားလုံးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအရာများကတော့ -
- ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
- ထုတ်ကုန်/ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ထိတွေ့မှုများ
- အသုံးပြုသူများအား အတည်ပြုပေးနိုင်မည့် အခြားအချက်အလက်များ တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါပြောကြားခဲ့တဲ့ အချက်အလက်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ကြော်ငြာများကို targeting ပြုလုပ်ခြင်းအား ပြုလုပ်ရာတွင် သုံးစွဲသွားနိုင်ပြီး သင့်ရဲ့ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနဲ့ သင့်ရဲ့တည်နေရာကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းအားဖြင့် မျှဝေပေးလိုက်တဲ့အချက်အလက်များဟာ လုပ်ငန်းများအနေနဲ့ သင့်ထံသို့ ငွေပေးချေမှုအတည်ပြုလွှာများနဲ့ ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို messaging platform မှတဆင့် တိုက်ရိုက်ပေးပို့မှုများကို ပြုလုပ်နိုင်စေတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ဒေတာမျှဝေမှု ပေါ်လစီစည်းမျဉ်းများဟာ Facebook ရဲ့ business hosting solution များရွေးချယ်အသုံးပြုလျှက်ရှိနေတဲ့ လုပ်ငန်းများအတွက်သာ ဖြစ်ပြီး Facebook မှ ပြောကြားချက်များအရ ထိုသို့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့လုပ်ငန်းများကို label တစ်ခုဖြင့် ရှင်းလင်းစွာသတ်မှတ်ဖော်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိခဲ့ရပါတယ်။